कविताको कमाल – मझेरी डट कम
उदण्डलाई दण्ड ! अर्थात् लठ्ठीको झट्टी ! लठ्ठी पनि हेर्नाका छन् । कुनै लामा, कुनै छोटा, कुनै सिकुटे, कुनै मोटा । लठ्ठीको प्रमोशन भएर छालाले मोडे छडी सुनको भए दण्ड । त्यही दण्ड लिने दङ्ग पर्दै जङ्ग गर्न बेर हुन्न । दण्ड भएपछि दण्डवत् गर्नेको लहर लागि उदण्ड भएको पत्ता पाइन्न । लठ्ठीको काम पशु तह लगाउन गोठालाले प्रयोग गर्न लाग्दा पशु अधिकारवादीले ड्रममा लठ्ठी पडकाइ हाल्छन् । अनि ठटाउने भनेको लठ्ठी नहुने अर्थात् दण्डवत् नगर्नेलाई नै हो । नत्र पुलिसले थोडै फुलिस हुन लठ्ठी समाउँथे ? लठ्ठी समाउँदा किन रमाउँथे ? लठ्ठी समाउँदा हात कमाउनेले किन कमाउँथे र जमाउँथे ? अझ भेडाको बगालझैँ ठूलो भीड देखे लाठो नै उचाल्छन् ।
लठ्ठी पक्डने मास्टर पनि हुन्छन् । वेनमास्टर त अझ लठ्ठीले नै लत पर्दै पार्दै धुन तर्काउँछन्, मर्काउँछन् र चर्काउँछन् । लठ्ठी लिनुभन्दा कलम लिनु जाति ! कलमले उस्तै परे छाती चिर्छ र सात पुस्ता पिर्छ । कलमले तरबारको घरवार उडाउँछ । नपत्याए हेर्नोस् पत्रकारको पत्रिका र पत्रिकाको पत्रकार ! मान्छेलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कलमले मल्हम लगाउन पछि पर्दैन । नपत्याए नेताको पछि बुद्धिजीवी वा बुद्धीजीवीको पछि बुद्धिजीवी हेर्नोस् ! लठ्ठीको झट्टी हैन लठ्ठीको कविता पड्काएपछि लठ्ठी हाल्छ मान्छे । नपत्याए एउटा गीत नै सुन्नोस् –
काली तीरमा पहिरो गयो
थुन्यो खोलो खोल्ने को हो ?
पहरा फोर्ने मान्छे को हो ?
छिटो छिटो भन्दाभन्दै
बगायो नि ढुङ्गा मूढा
फूर्ति गर्ने पट्ठा पनि
भएछन् नि खुम्रे बूढा !
हेर्नोस् कविताको कमाल ! कविता पनि हेर्नाका छन् । कुनै लामा, कुनै छोटा, कुनै टाक्सेका कुनै मोटा,कुनै टोटा कुनै लोटा कुनै छन्दका कुनै छन्द न बन्दका । कुनै द्वन्द्वका कुनै दुर्गन्धका । कुनै रङको, कुनै ढङ्ग न रङ्गका । कविताको प्रयोगबाट रुन्चेलाई हँसाउनेदेखि मोहजालमा फसाउने काम तमाम । नपत्याए हेर्नोस् शोषकलाई हाइकुले हृवाइचेट पार्छ-
भरेङ चढ ।
अझ हनिमुन हाइकु झन् कमालको हुन्छ । यौनवादी भए नभएको व्याख्या गर्दा बर्बादी हुन्छ । नभए यो प्रगतिवादी हो-
कस्तो रोग यो
दूध पिएको थिएँ
जरो चम्कियो ।
नेतालाई दे दनादन गर्न हाइकु नै दन्काउनुपर्छ-
अरू त छँदै छ कविताबाट सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न गर्न सकिन्छ । अक्षतापाती र खेतीपाती उस्तै हो-
बीउ रोप्ने त्यो हली
हिलोमा डुब्यो ।
शिक्षा नदिदा पनि आफै जान्ने प्राथमिक संस्कारलाई अर्को हाइकुले ठाउँमै पुर्‍याउन सकिन्छ-
तर डुब्दैन ।
मान्छे भनेको एउटै स्वादमा नरम्ने अजीव जीव हो । हाइकु मात्र हैन मुक्तक पनि कम्ता छैन । मुक्तक ठाउँमा पर्‍यो भने मुक्तकण्ठले प्रशंसा नगरी सुख ? व्रतवन्ध गर्दा यही मुक्तकको मन्त्र दान गरे उन्मुक्त भइन्छ-
जगल्टा लामो गजल्ट
मुन्द्री कानमा उभयलिङ्गजिस्तो
बाँदरझैँ स्वभाव संस्कारमा विकार
मान्छे हेर्दा खोई के हो हान्ने गोरुजस्तो ।
व्रतवन्ध गरेपछि बिहे गर्ने चलन उहिलेको छ । व्रतवन्ध अघि हनिमुनको जात्रा सकेर झ्याइँकुटी झ्याइँ हैन झ्याइँकुटी पार्दै फुटी झ्याइँ पारेपछि विवाह गर्ने चलन आजको । यस्ता बिहेमा वैदिक विधिको साटो विधिअनुसार कविताले नै गिरि लिदीको भेद नपाउनेको झाँको किन नझार्ने ?
बिहे त भयो लाटाको अनुभव कस्तो
श्रीमान् पर्‍यो हिजडा नपुंशकजस्तो
हनिमुनमा मह चाट्छ चन्द्रमा हेर्दै
नै बनेछ प्रसूतिको बेडजस्तो ।
गजल ठोकेपछि बिहेमा पजल नहुने कुरै छैन ।
बिहे सक्न पाएको छैन अङ्ग्रेजीमा उल्था र उल्टा हुँदै बिहे हेवी अर्थात् गह्रौं हुँदाहुँदै त्यसैले थिचेर बाँचुञ्जेल नर्क भोग गरे पनि खुस्केपछि अर्थात् सास फुस्केपछि स्वर्गारोहण हुन्छ, हुन्छ । जसरी राजनीतिका नेताको शक्ति खुस्केपछि स्याप्रे बेलुन बन्छ ।
बाँच्दा गरेको कालो करतुतले भुँडी फुटुन्जेल हसुर्नेले नर्कको पुर्जी पाइसक्दा पनि कतै त्यसलाई वर्खासत गर्न सकिन्छ कि भनी
दर्खास्त हाल्छ सतसङ्गतमा सत्सङ्गतबाट सद्गत हुने ठानी स्वजनसँग भजन पाटीमा छिर्छ-
म्याद हो नै दुवै दिनको तैपनि दम्भ कस्तो
देखिन आँखा प्रभो कुन महँगो कुन सस्तो
पैसा, पद र प्रशंसाले बिर्सिए राम नाम
न घरको भएँ न घाटको प्रभो गधा जस्तो ।
खुस्केपछि सम्झनु पर्‍यो । श्राद्ध गर्नैपर्‍यो । पिण्ड दिने काम चाहिँ हास्यबाट गर्नु जाति । कविताको पिण्ड-
खुस्केपछि के को प्रीत
श्राद्धमा बज्यो फिल्मी गीत
प्रदूषण बढ्दै छ
नुहाउने कुन कुण्ड
भोलि महँगीले पिर्छ
खाउ जीउँदै पिण्ड ।
हेर्नोस्, कविताले र्फम चलाउने काम उहिले नै भानुभक्तले गरेका हुन् । ढिलासुस्तिको सास्ति पाएपछि अड्डाको फन्को मार्दा कुन रन्को निस्केको कुस्ती खेल्ने मस्तिको कविता कोरेका हुन् । भोलि भोलि भन्दै सब दिन वितिगो बक्सियोस आज झोली नै कवितामय बनाएपछि मान्छेको टोकसो माथि जरुर साथी म पागल भने देवकोटाले हेर्नोस्, आफै माथि व्यङ्ग्य महान् मान्छेले मात्र गर्न सक्छ । त्यसै मैले आफैमाथि कविताको व्यङ्ग्य बजारेको हुँ र ?
झुकेन शिर कतै पद र पैसामा खाली
भ्रष्ट भाँड भरौटेलाई दिएन कतै गाली
खाने एक पेट नै हो लाइन्न दुइटा टोपी
मरिचजस्तै भए मान्छे बोल्दैन मन खोली ।
कविताले दोहरी खेली श्रीमती भित्र्याउने काम उहिल्यै भएको हो । अहिलेका कवि लाछी परेछन् कि क्या हो ? कविताले भित्र्याउनु त कता हो कता भएकै पनि बाहिरिन बेर हुन्न । यसको प्रमाण कवि सम्मेलनमा कविता वाचनलाई पाचन गर्न नसकी जर्‍याकजुरुक दर्शक उठ्दै कुलेलम ठोकेबाट पनि पाइन्छ ।
कविता लामा जामाजस्तो बनाएपछि कसले हेर्छ ? हट प्यान्टीजस्तो ताङ्का चाहिन्छ-
पछि राँड मानिन
राँड त्यसै चिच्याइ
बाघ लग्यो घिच्याइ ।
यो त तान्का तन्काउने काम भयो । पुरानो उखानलाई रिमिक्स गरेपछि कमालको कविता भइहाल्यो । अब हर्नोस्, यो जमाना नै मिक्स र रिमिक्सको हो । अनमेल विवाहदेखि राजनीतिमा बेमौसमी गठबन्धन भएपछि कवितालाई पाइला पाइलामा प्रयोग गर्न नसकिने कुरै भएन । कविता र जाँड, जाँड र राँड, राँड र माड, माड र गाँड, गाँड र भाँड, भाँड र जाँडमै घुम्छ तान्त्रिक कवि अर्थोक त अर्थोक कविता माथिको मिश्रण कवितामा नै हुन्छ भने यसपछि अरू कुरै नगरी कविताको कमाल कस्तो हुन्छ भन्नै परेन-
कविता रोप कविता खाउ
कवि नै छोप्छ कविता दाउ
कवि नै हो है कविता साहू
कविता बिक्छ कौडीको भाउ ।
1 thought on “कविताको कमाल”
ठिस बुढा February 7, 2011 at 2:58 pm
“कविताको कमाल” ब्राभो!